गजल- रमेश श्रेष्ठ | खुल्लापाना
खुल्ला पाना २०७८ बैशाख १८, शनिबार (१ साल अघि) ६ पटक पढिएको
ए साथि युग बदल्न कलम चाहिन्छ।
कि गोला बारुद अनि बम चाहिन्छ।।
युग फेर्न हो कलियुगमा जन्मेको म,
केही त क्रान्तिकारी कदम चाहिन्छ।
अरे कहाँ त्यसै हाँस्नेकुरा गर्नुभएको?
यहाँ रुनलाई पनि परिश्रम चाहिन्छ।
पिडा भन्ने के थाहा चोट दिनेहरुलाई,
जनताको घाउ मेट्न मलम चाहिन्छ।
कुनै ठुलो रोग चाहिदैन रोगी हुनलाई,
ग्यास्टिक अनि प्रेसरअलि कम चाहिन्छ।
देश वनाउने कुरा कहाँ सजिलो छ र?
कम्तीमा दृढ इच्छा अनि दम चाहिन्छ।
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका-८,इर्खु